पृथ्वीलाइ जीवित ग्रह बनाउनको लागि यहाँको हावा, पानी, माटो, तापक्रमका साथसाथै जीवजन्तु र वनस्पतिको मुख्य भूमिका छ । यिनै तत्वहरु मिलेर पृथ्वीमा विशिष्ट प्रणाली निर्माण गरेका छन् । जैविक र भ...
पृथ्वीलाइ जीवित ग्रह बनाउनको लागि यहाँको हावा, पानी, माटो, तापक्रमका साथसाथै जीवजन्तु र वनस्पतिको मुख्य भूमिका छ । यिनै तत्वहरु मिलेर पृथ्वीमा विशिष्ट प्रणाली निर्माण गरेका छन् । जैविक र भौतिक वस्तुहरु मिलर बनेको यहि प्रणाली नै परिस्थितिक प्रणाली (ईकोसिस्टम) हो । जीवजन्तु र वनस्पतिको उपलब्धता, पानी, हावा र माटोको भिन्नता अनुसार संसारभर धेरै किसिमका इकोसिस्टम तयार भएका छन् । उच्च हिमालदेखि समुन्द्रको पिधसम्म रहेका यस्ता इकोसिस्टमले पृथ्वीलाई जीवन दिएका मात्र छैनन्,...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक भएसंगै मिश्रित प्रतिकृया प्राप्त भएका छन् । बजेट पुरानै ढर्राको, परम्परागत भएको, जनतालाई उत्साहित बना...
ब्यापार गर्ने निहुले भारतमा आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीले मद्रास र बंगाललाई निलेर शासन चलाइरहेको थियो र उत्तर पश्चिम भारतमा द्रुत गतिले जालझेल र सैनिक बलमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको थि...
नेपालको विजय अभियानले इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्वार्थमा धक्का...
हुन त यतिबेला तपाईं सशरीर हुनुहुन्न । सञ्चो विसञ्चो सोध्नुको पनि कुनै अर्थ रहेन ।
हुन त यतिबेला तपाईं सशरीर हुनुहुन्न ।
सञ्चो विसञ्चो सोध्नुको पनि कुनै अर्थ रहेन ।
तै पनि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धज्यूलाई सादर प्रणाम गर्दछु ।
जहाँसम्म मेरो कुरा छ ब्यक्तिगत वा पारिवारिक रुपबाट भन्नुपर्दा अहिलेसम्म हामी तपाईं जन्मेको...
नेपालमै होला श्रावस्ती ?
लामो समयसम्म लुम्बिनी गुप्त रहेपनि पछिल्ला ६० वर्षमा कछुवाकै गतिमा भएपनि लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र प्रचार प्रसार भएको छ । वर्षेनी ठुलो संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी र पर्यटकहरु लुम्बिनीमा प...
लामो समयसम्म लुम्बिनी गुप्त रहेपनि पछिल्ला ६० वर्षमा कछुवाकै गतिमा भएपनि लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र प्रचार प्रसार भएको छ । वर्षेनी ठुलो संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी र पर्यटकहरु लुम्बिनीमा पुगिरहेका छन् । गौतमबुद्धले जीवनका २९ वर्ष विताएको तिलौराकोट र त्यसको वरिपरी रहेका कुदान, निग्लिहवा, गोटिहवाले पनि लुम्बिनीको आड पाएर संरक्षण र प्रचार पाएका छन् । देवदह र रामग्रामले पनि विस्तारै संरक्षण र प्रचार पाउदैछन् ।
लुम्विनीमा सम्पन्न दो...
बजेटमा कोभिड र राजनैतिक अस्थीरताको प्रभाव
विगत केही दिनदेखि जारी राजनैतिक अस्थीरताको प्रभाव बजेटमाथि पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ । राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेगरी दुई चरणमा मध्यावधी निर्वाचनको घोषण...
विगत केही दिनदेखि जारी राजनैतिक अस्थीरताको प्रभाव बजेटमाथि पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ । राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेगरी दुई चरणमा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । यो सवै अस्थीरताको कारक सत्ता संघर्ष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला तर सत्ता संघर्षको दौडमा देशको आर्थिक विकास कति पछि पर्दैछ भन्ने हेक्का कसैले राखेको देखिएन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यस अनुसार ६ दिनभित्रमा बजेट आईसक्न...
जैविक विविधता संरक्षण किन र कसरी ?
विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा देखि समुन्द्री सतह देखि ५७ मिटर मात्र उचाइमा रहेको मुसहरनिया विचको दुरी छोटो भएपनि यी दुइ ठाँउ विचको भोगोलिक विविधता निकै धेरै छ । यहि भौगोलिक विविधतामा रहेका हि...
विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा देखि समुन्द्री सतह देखि ५७ मिटर मात्र उचाइमा रहेको मुसहरनिया विचको दुरी छोटो भएपनि यी दुइ ठाँउ विचको भोगोलिक विविधता निकै धेरै छ । यहि भौगोलिक विविधतामा रहेका हिमाल, पहाड , तराइ अनि नदि र पहाडले बनाएका खोच, गल्छी, उपत्यका र बेसिले नेपाललाई जैविक विविधतामा समेत सम्पन्न राष्ट्र बनाएका छन् । अहिले सम्म विस्वमा १७ लाख २९ हजार सात सय प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पतिहरु पहिचानं भएका छन् । नेपाल वातावरण प्रतिवेदन २०१३ का अनुसार विस्वमा हालसम्म पत्त...
अर्थतन्त्र जोखिममा, सुधारको आशा कायमै
कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभावले फेरि अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । गत वर्षको कोरोना प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने तयारी हुँदै गर्दा दोस्रो लहरको सुरुवातीले मुलुकको समग्र क्षेत्र प्रभ...
कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभावले फेरि अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । गत वर्षको कोरोना प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने तयारी हुँदै गर्दा दोस्रो लहरको सुरुवातीले मुलुकको समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्र जोखिममा रहेपनि एसियाली विकास बैकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदनले सन् २०२० को १.९ प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने उल्लेख गरेको हो । बै...
गाउँ ब्यूँताउने अवसर
कोरोना कहर बढेकोले सरकारले २०७६ चैत्र ५ देखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि शहरमा पढ्न बसेका बालबालिका र उनीहरुलाई पढाउन ल्याएका अविभावकहरु गाउँँ फर्कने क्रम शुरु भएको थियो । त्...
कोरोना कहर बढेकोले सरकारले २०७६ चैत्र ५ देखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि शहरमा पढ्न बसेका बालबालिका र उनीहरुलाई पढाउन ल्याएका अविभावकहरु गाउँँ फर्कने क्रम शुरु भएको थियो । त्यसको सातादिन नपुग्दै सरकारले देशभर लकडाउन लागु गरेपछि शहरमा बस्ने धेरै मानिसहरु हतारहतार आफ्नो गाउँँघर फर्केका थिए । शहरमा गएकाहरु मात्र नभई विदेशमा गएकाहरुले समेत आफ्नो हरसम्भव जुक्ति लगाउँर गाउँँ फर्केका थिए ।
अरु वर्षमा दशैको बेलामा मात्र ग...
हिजोआज फेसबुकमा कसैको फोटो देख्ने वित्तिकै खुसी भन्दा पनि भयले गाँज्ने गर्दछ । यद्यपि जन्म, विवाह र कर्ममा...
हिजोआज फेसबुकमा कसैको फोटो देख्ने वित्तिकै खुसी भन्दा पनि भयले गाँज्ने गर्दछ । यद्यपि जन्म, विवाह र कर्ममा प्राप्त गरेका सफलताका लागि दिएका शुभकामना र बधाइका पनि पोष्टहरु यदाकदा अहिले पनि आउछन् । तथापि तिनको तुलनामा मृत्युका कारणले पोष्ट गरेका श्रद्धाञ्जलीहरु अत्यधिक हुने गर्दछन् । त्यसैले पनि पोष्टमा लेखिएका अक्षरहरु भन्दा पनि फोटोमा पहिले आँखा पर्दछ र अक्षरहरु पढ्न नभ्याउदासम्म आँख...